Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयत्नमा छौं, सरकारमा जाँदैनौं’
जित लगत्तै भट्टराईः कांग्रेससँग गठबन्धन होइन, चुनावी तालमेल मात्रै थियो
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई छ हजार आठ सय ७४ मतान्तरले प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्। यस क्षेत्रमा खसेको ६० हजार ११७ मतमध्ये भट्टराईले ३१ हजार आठ सय सात मत र श्रेष्ठले २४ हजार नौ सय ३३ मत ल्याएका छन्। दुई हजार छ सय ३८ मत बदर भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गोरखाले शनिबार नै काठमाडौंबाट गोरखा झरेका भट्टराईलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। शनिबार साँझ विजयी भएको प्रमाणपत्र लिएलगत्तै भट्टराईसँग नेपालखबरका प्रदेश प्रतिनिधि प्रशन्न पोखरेलले गोरखामा गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः
यो जितको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ?
नयाँ शक्ति पार्टी र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा हामीले उमेद्वारहरु प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसको पक्षमा जनताले अभिमत दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति आम मतदाताप्रति म आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार, प्रशासन, निर्वाचन अधिकृतहरुको भूमिकाप्रति आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु।
मेरो जितको श्रेय मुख्यत गोरखाका मतदातालाई नै जान्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ शक्तिलाई एक्ल्याउने, निषेध गर्ने ठूलै प्रयत्न नभएको होइन। तर गोरखाली जनता जसले नयाँ शक्ति भर्खरै जन्मेको शक्ति भएर पनि यसको पक्षमा मत ब्यक्त गरेका छन् उनीहरुलाई नै मुख्य जस जान्छ। त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले पनि रातदिन खटेर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरुलाई पनि जस दिन चाहन्छौं। त्यस अतिरिक्त मिडियालाई धन्यवाद छ।
कांग्रेससँग तपाईंको सहकार्य अल्पकालीन मात्रै हो कि दीर्घकालीन जान्छ?
यो त मुद्दामा आधारित हुन्छ। धेरैले कांग्रेससँग गठबन्धन भन्ने गर्छन् यो गठबन्धन होइन, चुनावी तालमेल मात्रै थियो। तालमेल सफलतापूर्वक नै सम्पन्न भएको थियो। गोरखा र रसुवामा तालमेल गरिएको थियो। रसुवामा तीन वटै सीट तालमेलले गर्दा हामीले हात पारेका छौं। गोरखा २ मा सफल भयौं, १ मा के हुन्छ हेरौं, चुनावी नतिजा आउन बाँकी नै छ।
नयाँ शक्ति राष्ट्रिय पार्टी बन्ला?
गोरखा र रसुवामा गरी तीन सिट प्रत्यक्ष जितेका छौं। यसले आधा संभावना बढाएको छ। गोरखा २ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका साथै रसुवामा प्रदेशसभामा जितेका छौं। ४ नम्बर र ३ नम्बर प्रदेशसभामा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ। आधा काम हाम्रो सम्पन्न भएको छ। समानुपातिकको मतपरिणाम आएपछि मात्रै थाह हुन्छ, राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ या हुन्न र थ्रेस होल्ड पार गर्छ या गर्दैन भन्ने।